Mbido nke Logos | Martech Zone
Sunday, Eprel 21, 2013 Sunday, Eprel 21, 2013 Douglas Karr
Ndi akwukwo na Logo Company ajụ Kwesịrị Ibu Ago Na-abaghị Uru? Mba logos abụghị naanị ihe echefu echefu echefu ma ọ bụ ọhụụ nke akara ha na-anọchi anya ya, ha daberekwa na ọkara nke ha hụrụ na teknụzụ iji lee ha. A na-ebipụta akara ụgbọala, na weebụ, na ụgbọ ala… ya mere ga-e ma na-anọchite anya nke ika na viewable na a arụkọ n'ụzọ na niile na-ajụ ase… na imi ihe nke gị moto.
Afọ ole na ole gara aga, imepụta akara ngosi jikọtara etu akara ga-esi dị ka ojii na ọcha ma ọ bụ na igwe faksị… ndị a abụghị ndị na-ajụ ase anyị na-eche ugbu a Logo ekwekọghị tozuru oke ka oge na-aga, ọ nwere ike ịbụ ihe dị mkpa ka ị na-adị ka ọhụụ ọhụrụ. N'ọdịnihu, enwere m ntụkwasị obi na akara ngosi atọ, nke mbadamba, ma ọ bụ mmegharị ga-apụta ìhè karịa ka ngwaọrụ anyị na-akwado ha. Enwere ọtụtụ nke njirimara logo ọ bụ maka ịga n’iru ka akara ngosi si aga n’ihu.
Anyị emelitere akara ngosi anyị nso nso a na DK New Media, site na:
Versiondị ahụ bụ nchikota nke D na K na onyogho kwesiri igosipụta anya na-achọ ọdịnihu. Ọ dịghị onye ọ bụla nwetara nke ahụ, n'agbanyeghị, na njakịrị nke nku Batman malitere. Onye na-ese ihe nkiri anyị, Nathan, weghaara ma mepụta akara ngosi nke na-anọchite anya anyị nke ọma. Anyị na-ewe ụzọ dị iche iche, ụzọ gasị iji bulie nsonaazụ maka ndị ahịa anyị elu. Ọhụrụ logo:
Ndị a bụ ụfọdụ evolushọn nke logos ama ama Logo Company:
Tags: apụl logobmw akaraakara canonibm logoKodak logologologo nke mercedeslogo mercedes-benzmicrosoft logomicrosoft windo logopepsi logoakara sheiAkara volkswagenlogo vwwindo windonjirimara xerox
Apr 22, 2013 na 10: 09 AM
Nku Batman na-amasị m! Ma Star Wars X-Wing Fighters na-amasịkwa m. Mkpakọrịta dị otú ahụ ọ̀ bụcha ihe na-adịghị mma? Ikekwe, ma eleghị anya ọ bụghị. Echere m na grajentị nwere ike ịgbakwunye ọgaranya na njirimara, mana nke ọhụrụ gị na-adabere na grajentị iji kpaa agwa. Nke ahụ ga - etinye gị na nsogbu na obere nha, ma ọ bụrụ na / mgbe ịchọrọ ụdị ojii na ọcha.
Ma ka m kwenyere na mmụọ nke isiokwu a gbasara mmalite nke akara ngosi, echere m na ọ bụ ihe ọchị ị gụnyere Pepsi. Fọdụ nwere ike ịrụ ụka na ebumpụta ụwa nke ụdị ahụ bụ n'ihi ụjọ - jidere ndụ. Echere m na eziokwu ahụ ha gbanwere ya ọtụtụ ugboro na-egosi mmetụta nke enweghị ntụkwasị obi na inwe obi abụọ. Ebe onye kachasị na-asọmpi Coca-Cola adaberewo na akara ya site na afọ. Changegbanwe na isi akara ahụ bụ ụzọ aghụghọ siri ike, ọdịbendị na-ewu ewu ejirila ya dị ka iberibe nke Americana.
Isi okwu m bụ, ọ bụ ezie na njirimara ekwesịghị ịdị oge ọ bụla, ị kwesịrị ịgba mbọ maka nke ahụ. Can nwere ike ịgbanwe ozi oge niile, mana ndị mmadụ na-enweta nkasi obi ma tụkwasị obi na ụdị ntụkwasị obi, ma na-akwa ndị na-adịghị emo. Kedu ka ị ga - esi luso ịkatọ ndị na - azụ ahịa ọgụ? Bụrụ eziokwu.
Apr 23, 2013 na 4: 57 AM
Ihe ngosi YMCA abughi ihe obula - obu ezie na ha nwere ike acho ya. Ha bụ akara ngosi nke YMCA dị iche iche ma ọ bụ ihe owuwu yana dịka m nwere ike ịgwa ha na ha ka na-arụ ọrụ.